IBM jisiri ike mepụta neurons | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ bụ ndị otu ndị nyocha na-anwa ịmepụta nkwa nke kọmpụta ọgbọ ọhụụ nwere ike ịnye teknụzụ ọhụụ, ihe owuwu ụlọ ... na nkenke, dị ngwa, rụọ ọrụ nke ọma ma rie obere. Zọ ndị a na-arụ ọrụ dị ọtụtụ na, oge a, IBM nwedịrị ike ime mgbanwe mgbe ị gbasịrị ịmalite otu usoro nke 500 neuronu artificial eji teknụzụ na-agbanwe mgbanwe nke nwere ike ịme ka arụ ọrụ nke ụbụrụ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị echee ihe kọmputa bụ, ọ gaghị esiri anyị ike ịmata myirịta na ụdị ụbụrụ ọ bụla, ọ bụghị n'efu, enwere ọtụtụ usoro mmụta na ọgụgụ isi nke na-etinye ngwanrọ na ngwaike ọnụ iji chepụta ụzọ iji mee ihe ọ bụla ofdị ụbụrụ sistemụ nwere ike ịmụ ihe ma mee ihe, n'ọnọdụ a, dị ka mmadụ. Oge a, na sistemu nke akwara neuron, anyị ga-enweta usoro ọgụgụ isi ndị a iji gaa otu nzọ ụkwụ n'ihu.
IBM meghere uzo nye ọgbọ ohuru nke usoro ọgụgụ isi
Iji imitateomie ọrụ ụbụrụ anyị, ebe ihe ọmụma ahụ dị na usoro ọgbụgba dị iche iche nke akwara ozi na njikọ ọhụrụ nke na-etolite, ndị nchọpụta IBM ahọrọla teknụzụ nke mgbanwe mgbanwe, ụdị ebe nchekwa nwere ike ịchekwa data n'ụzọ na-enweghị isi n'ihi na ọ bi na nhazi ahụ yana usoro mmekọrịta ya. Ihe ịma aka nke IBM nwetara ugbu a bụ ijikọta nanostructures dị mgbagwoju anya na iji ike a na-anabata, ihe ndị nkịtị na omume enweghị usoro.
Banyere ihe ndị kachasị adọrọ mmasị na akwara ndị a, pụta ìhè dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị naanị na ha na-e theiromi ọrụ ha, kamakwa ha nhazi ekele na enwere ike ịnweta uzo, akpụkpọ ahụ, soma na axon. Dịka nkọwa zuru ezu, iji mimomie akpụkpọ ahụ nke eriri anụ ahụ, a na-eji sel ndị sitere na germanium, tellurium na antimony. O doro anya na ekele maka nchọpụta a, na IBM ha ejirila meghee ọnụ ụzọ nke ọgbọ na-esote nke ọgụgụ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » IBM jisiri ike mepụta akwara ozi
Arduino Pokéball, ezigbo pokéball ịchụ nta pokémons